Muvhuro, March 23, 2015 Chitatu, September 2, 2015 Douglas Karr
Mazuva ese, vashandisi veTwitter mamirioni makumi maviri nemaviri vanotumira anopfuura mamirioni mazana mashanu emaTweets. Neseti chaiyo yemazwi, mabhizinesi anogona kugadzirisa vatengi vemuno. Icho hunyengeri kunzwisisa kuti ndeapi mazwi makuru anoshanda uye kuti hurukuro dzinoitika sei pa Twitter. SocialCentiv inoratidza vatengi vanoita Tweet vavariro yavo kune chigadzirwa, sevhisi, kana zvemukati zvine chekuita nebhizinesi rako. Iwe unogona ipapo kuendesa vangangove vatengi nechinangwa chakanangidzirwa, chakasarudzika chakagadzirirwa kukanganisa kwavo sarudzo yekutenga. Munguva yegore ra230